I-QRF888 I-Audience Response System
Isistimu yokuphendula izethameli ze-QRF888
Isistimu yokuphendula yomhlangano neyekilasi ingakusiza ukuthi uhlole ngokushesha ukuthi izethameli zakho zinawe yini, ngaphandle kokuthi ukhiphe omunye umuntu. Umbiko osheshayo. I-Student ID login Auto.Sekela abafundi abangafika kwabangama-60 bekude.
Isethi engu-1 yesistimu yokuphendula ye-QRF888 ihlanganisa umamukeli ongu-1+30 izilawuli kude zomfundi
Lezi izilawuli kude zezethameli ezithengiswa kakhulu e-Qomo ezinezindleko zomnotho kakhulu.
Qaphela: Sisekela uhlobo lwe-Qomo lwedemo ngenkathi ekukhiqizweni ngobuningi samukela i-OEM/ODM
Isilawuli kude somfundi
Idizayini ethambile nekhabhinethi njenge-Iphone x
Izinto ze-PC ezinobungani bemvelo, umuzwa osondelene we-ergonomic, akukho ukucasuka esikhumbeni, inqubo yokhiye ethokomele yabafundi.
Izinkinobho ezilula kusixhumi esibonakalayo
Isibonisi se-LCD ongabheka ukukhetha kwezimpendulo nesimo samandla. Okhiye beqiniso noma amanga, okhiye bokukhetha i-AF kanye nenkinobho yesandla.
Isiteshi esiyisisekelo sixhuma kwikhompyutha yakho ephathekayo nge-USB futhi sithola idatha yokuvota kumakhiphedi ngomsakazo; Alukho uxhumano lwe-inthanethi noma lwe-WiFi oludingekayo. Kuyisixazululo esihle, ipulaki nesidlali.
I-antenna yangaphandle enamabhendi amabili ngaphandle kolwazi olungekho.
Nikeza nge-software esebenzisanayo yamahhala
I-QVote isofthiwe esebenzisanayo efana nesistimu yethu yokusabela i-QRF888. Inokuhambisana okuqinile, ukusebenza okulula kokuxhumana kanye nemisebenzi eminingi. Isoftware ye-QVote ehloselwe umsebenzi wokuphatha abafundi, ukusebenzisana kwekilasi, ukuhlolwa kwekilasi, ukuthekelisa kombiko njll.
Sekela amafayela ukuze uvule i-PPT/Isithombe futhi Kulula ukwakha ikilasi
Amathuluzi amaningi kumenyu ethambile ye-Qvote.
Sekela iphakethe elibomvu lephuzu elilodwa(amaphuzu angashintshi ephakethe ngalinye elibomvu), iphakethe elibomvu elinenhlanhla(amaphuzu angahleliwe) ukuze wenze ikilasi libe mnandi.
Le softhiwe futhi isekela ukuthuthukela kumodi yothisha ababili ukuze kufundiswe ukude noma umhlangano
Uhlobo lokuvota okuningi
Umbiko osheshayo onezinhlobo ezahlukene zesithenjwa sakho. Isibonelo, i-Excel, i-Histogram njll.
Kulula ukubuyekezela kumodi yothisha ababili ukuze ufundise ukude ohlelweni lokuphendula abafundi
Iphakheji evamile yisethi engu-1/ibhokisi
Ungathola isikhwama samahhala ngohlelo lokukhiqiza ngobuningi.
Lesi sikhwama sikwenza kube lula ukuphatha uhlelo lokuphendula luyise noma yikuphi lapho ongathanda ukwenza khona isethulo sakho.
Usayizi wokupakisha: 430 * 324 * 195mm
Isisindo esiphelele: 3.7kgs
Olandelayo: Izichofozi Zempendulo Yezithameli zegumbi lenkomfa elenziwe e-China
Okwedlule: I-QRF999 Uhlelo Lokuphendula Izithameli
Isofthiwe Yezimpendulo Zezithameli
Uhlelo Lokuphendula Umsindo
I-Interactive Audience Response
Izichofozi zempendulo yezithameli ze-QRF888 imininingwane esheshayo
I-QOMO QRF888 QuickGuide V1.0
QVote imanuwali yomsebenzisi
Incwajana Yohlelo Lwezimpendulo Zezithameli ze-QRF888